Ukwaneliseka okukhulu ngenxa yokuthunyelwa kwe I-TrovaWeb okwabe kuthola udumo olukhulu lwe Iphini likamongameli mathupha UCaterina Doddis, Isikhulu Esiphezulu se Ukuqala kweMessina. Nakhu okuvelele kosuku.
Imihlangano ebalulekile ePalermo: Ilungu le-TrovaWeb elithembisayo laseSicindustria
Inyanga kaSepthemba yaletha enye injabulo enkulu ku Ukuqalisa kweSicilian manje idume kulo lonke elase-Italy. Ngempela, iseshini yasekomkhulu laseSicindustria ibiyisikhathi esithele kakhulu nesithakazelisayo, ebesenziwa phambi kweningi osomabhizinisi abanamandla baseSicilia nobuntu obusezingeni eliphakeme, abahlangana ukukhetha i- umongameli ingxenye Ubuchwepheshe kanye neDijithali.
Ukuhwebelana okunezithelo phakathi kwabakhiphi abaphezulu bezwe lobuchwepheshe
Ubuntu obuhlangane nabo ngesikhathi sokhetho luka Umongameli e Iphini likamongameli beziwumthombo wokhuthazo olukhulu kuthimba leTrovaWeb. Phakathi kwalokhu, ikakhulukazi, U-Alessia Bivona, intatheli nesikhulu sezindaba, ugqame ngobungcweti, ikhono nokuzwela kwakhe. Omunye umhlangano okhiqizayo futhi oshukumisayo kakhulu yilowo owawunonjiniyela USonia Ferrara, omunye uchwepheshe ovelele nomphathi womkhakha Wezomnotho Nebhizinisi.
Umhlangano nabaphathi abaphezulu bezinkampani zaseSicilian kanye nabakhiqizi abakhulu bomkhakha weDijithali
Isimo sezulu sokuhloniphana okukhulu nokunconywa sakhiwa ngokushesha kusuka ezikhathini zokuqala zeseshini, ezenzeka nxazonke Ithebula likaMongameli. Futhi lapha sesifikile isitifiketi sokuqala sokuhlonishwa kubo bonke abakhona, kuze kube seqophelweni lokufuna ukuphathisa i- Umongameli weSicindustria ku-CEO weTrovaWeb, UCaterina Doddis. Akusizi ngalutho ukudwebela udumo olukhulu oluzwakele, ngesiphakamiso ebesinobunye ubufakazi bomsebenzi oncomekayo owenziwe kuze kube manje. Ukubonga nokubonga kwakuyimizwa eyinhloko ezwakalayo, ixutshwe nomthwalo omkhulu emcabangweni wokwenza isabelo esinzima nesidume kangaka.
Ukhetho lwethebula likaMongameli waseSicindustria
Ngemuva kokuncipha kwesiphakamiso esincomekayo, i Umongameli ingxenye Ubuchwepheshe kanye neDijithali kushiwo ukuthi UFabrizio Bignardelli, owayenguprofesa we-Business Communication Strategies nochwepheshe omkhulu we amasu ebhizinisi.
Lapho umongameli esekhethiwe, sekuyisikhathi sokukhetha i- Iphini likahulumeni. Futhi futhi isiphakamiso sabo bonke ababekhona sabhekiswa ngazwi linye kuCaterina Doddis. Nakhu ukuthi, namhlanje, iTrovaWeb, ebusweni be-CEO yayo, iseVice-kamongameli yengxenye yeDijithali ISicindustria.
Izindaba ezinhle zivela enyunyaneni phakathi kweSicindustria neTrovaWeb
La ukubambisana phakathi I-TrovaWeb e ISicindustria, ivalwe yilokhu kuqashelwa okukhulu, ikhombisile ukuthi icebile futhi ikhiqiza ngokweqile. kanye nokumemezela izindaba ezinhle ezizofika ngokukhulu ukushesha. Eqinisweni, eyodwa isivele isayiniwe umhlangano phakathi kwamaqiniso amabili anika iSicindustria ithuba lokuthengisa kabusha Izinsizakalo ze-TrovaWeb ezintsha ngamanani ancishisiwe. Ukuthola okwengeziwe, vele uhlale ubukele iziteshi zethu.
Tags: ukumaketha ibhizinisi Izindaba sicindustria thola